လစဉ်ပထမပတ် စနေနေ့တိုင်း ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် MRS၏ Special Road Show ~ The ICT.com.mm Blog
လစဉ်ပထမပတ် စနေနေ့တိုင်း ကျင်းပမြဲဖြစ်သည့် MRS၏ Special Road Show
ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ မိုဘိုင်းဟန်းဆက်များကို ၀ယ်ယူလိုပြီး ရုံးဖွင့်ရက် များနှင့် ရုံးချိန်အတွင်းတွင် မအားလပ်သူများအတွက် အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်တွင် မိသားစု အေးဆေးစွာ လေ့လာ ၀ယ်ယူနိုင်စေရန် အတွက် MRS Sales Centreမှ အထူးဈေးရောင်း ပွဲတော်များကို လစဉ် ပထမပတ် စနေနေ့တိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိရာ လာမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၅) ရက်နေ့ (စနေနေ့)တွင် ” MRS အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်” ကို ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဟု သိရှိရပါသည်။
MRS Moblie Cornerမှ HTC, Lenovo, Sony, Samsung, Huawei အစရှိသည့် Branded Handset အမျိုးမျိုးနှင့် Tabletအမျိုးမျိုးတို့ကို ဈေးနှုန်း ချိုသာစွာဖြင့် Warranty အပြည့်အ၀ပေး၍ ရောင်းချပေးလျှက် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပြပွဲနေ့တွင် Mobile Handset ၀ယ်ယူသူ Customer များအတွက် အထူးလက်ဆောင်များ၊ အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ၀ယ်ယူပြီးသော Handsetများအတွက် လိုအပ်သော Software များနှင့် Myanmar Font များကို အခမဲ့ ထည့်သွင်း ပေးသွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။
Internetနှင်. Gameဆိုင် ဖွင့်လိုသူများအတွက် မော်ဒယ်မြင့် ကွန်ပျူတာအစုံများကို အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နည်းပညာ အသုံးပြုထားသော Toshiba Notebookများ Fujitsu Notebookများနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသည့် Apple Product များနှင့် Prolink Products (iP Cameras, Wireless Routers, Network Switchs, GSM Moderms, Wireless Presenter, Share Hub Devices)တို့ကို အထူးချိုသာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချ ပေးမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။
ပြပွဲနေ့တွင် Fujitsu, Toshiba , Lenovo, Acer, HP, Dell, ASUS , Appleအစရှိသော အရည်အသွေးမြင့် Branded Notebookအစုံအလင်၊ ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး Desktop Computer များ၊ Branded Desktop များ၊ All in One PCများကို အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး Printer, Scanner, UPS, IPS စသော ကွန်ပျူတာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း အထူးဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် Desktop တစ်စုံ ၀ယ်ယူသူတိုင်း အတွက် လက်ဆောင် (၇)မျိုးနှင့် Lucky Drawရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Notebook တစ်လုံး၀ယ်ယူသူတိုင်းအတွက် လက်ဆောင် (၁၀) မျိုးနှင့် Lucky Draw ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျပ်(၁)သိန်းဖိုးအထက် ၀ယ်ယူသူ Customer တိုင်းအတွက် ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲများ ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျပ်(၃)သိန်းအထက် ၀ယ်သူများအတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ဗလာမပါကံစမ်းမဲများအပြင် Double Special Lucky Drawစသော အထူးဆုများကိုလဲ ထပ်မံပေးအပ် သွားမည်ဟု သိရပါသည်။
MRS Special Sales
1.အိမ်သုံး, ရုံးသုံး , လုပ်ငန်းသုံး ဈေးနှုန်းချိုသာဆုံး LenovoIdeapad G 405 Notebook
AMD E1 – 2100 (1.8 GHz), 2GB DDR3 , 320 GB , 14” LED Display, Intel Graphic ,USB 3.0 ,Card Reader,DVD –RW .Lenovo b/g/n.
FREE GIFT – Norton Intivirus, Mouse US $ – 359
2.Graphic2GB ပါ၀င်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာဆုံး Lenovo ideapad G 400 Core i3 (W/ G 2GB) Notebook
Core i3 – 3110 (2.4 GHz) ,4GB DDR3,500 GB, 14” LED Display, AMD2GB , USB 3.0 , Card Reader, DVD-RW.Lan , Lenovo b/g/n.
FREE GIFT – Norton Intivirus, Mouse US$ – 499
၄င်းအစီအစဉ်များကို MRS Sales & Service Centre (YGN) အမှတ် (၄၇ – ၅၃)၊ဘိုကလေး ဈေးလမ်း (အောက်ဘလောက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို.နယ်၊ရန်ကုန်မြို.။ ဖုန်း – ၃၉၂၂၅၉ ၊ ၃၉၂၂၅၇၊ ၃၉၂၁၃၈ နှင့် MRS(MDY)အမှတ်(၁၃၁)၊(၃၁)လမ်း၊ (၇၆)လမ်းနှင့် (၇၇)လမ်းကြား၊ချမ်အေးသာဇံမြို.နယ် မန္တလေးမြို.။ဖုန်း-၀၂-၆၄၉၇၃၊၆၄၉၇၄၊ ၀၉၅၀၆၂၁၅၇ တို့တွင် အောက်တိုဘာ(၅)ရက် မနက် (၉)နာရီ မှ ညနေ (၆)နာရီ အတွင်း (တစ်ရက်တည်းသာ) ကျင်းပသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
MRS Special Road Show
Newer နိုင်ငံခြားဖြစ် အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်နှင့် စီးကရက်များ တရား၀င်တင်သွင်းရောင်းချနိုင်ရန် ဆွေးနွေးလျက်ရှိ
Older လွှတ်တော်အတွင်း ပါတီနှစ်ခု အားပြိုင်၍ အမေရိကန်အစိုးရ လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်း